Minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) : Nanamafy fiaraha-miasa i Etazonia, Indonésie, Brésil ary Unicef -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) : Nanamafy fiaraha-miasa i Etazonia, Indonésie, Brésil ary Unicef
Minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE) : Nanamafy fiaraha-miasa i Etazonia, Indonésie, Brésil ary Unicef
14/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fanokafana indray ny masoivohon’i Madagasikara tany Londres, nisesy indray omaly teny Anosy, ny fitsidihan’ireo masoivoho vahiny monina sy miasa eto amintsika ny minisitry ny Raharaham-bahiny (MAE) vaovao, Henry Rabary-Njaka. Tonga niarahaba sy ny nidinika tamin’ny minisitra tamin’izany ny masoivohon’i Etazonia, ny mpiandraikitra ny raharaham-bahiny vaovaon’i Indonésie, ny solontenan’ny Unicef, ary ny masoivohon’i Brésil.
Ho an’i Etazonia, nambaran’ny masoivohony miasa sy monina eto amintsika, Robert Yamate, fa nahafinaritra ny fihaonana. Maro ireo nodinihina nandritra izany eo amin’ny fifandraisan’ny firenena roa tonta, izay manaporofo izany ny fisian’ny USAID sy ny fanomezan-tanana ho an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra maro. Voaresaka ihany koa, raha ny voalaza hatrany, ny mahakasika ny fanomezan-tanana eo amin’ny vonjy taitra, indrindra amin’ireo loza voajanahary, toa ny haintany tany Atsimo, ny fahasahiranana tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo. Nambaran’ity masoivoho ity ihany fa niaina tamina loza voajanahary vao haingana ihany koa i Etazonia, ka noho izay indrindra no nifandinihana amin’ny tokony hisintonana lesona sy traikefa ho an’ny vahoaka.
Nanambara ny mahakasika ny fifidianana ihany koa ny masoivoho Robert Yamate amin’ny fanampian’izy ireo, izay mihoatra ny 1 tapitrisa Dolara mahery amin’ny alalan’ny “Basket fund”. Mila famatsiana betsaka ny fifidianana, raha ny nambarany, mba ho fifidianana eken’ny rehetra, mangarahara sy malalaka.
Ho an’i Indonésie indray, nanambara ny misahana ny raharaham-bahinin’izy ireo vaovao fa mipetraka tsara ny fiarahara-miasan’ny firenena roa tonta. Voalaza fa maro ireo sehatra hiarahan’i Indonésie sy Madagasikara, indrindra eo amin’ny sehatra ara-toekarena, ny tontolon’ny varotra sy ny politika ary koa eo amin’ny sehatry ny sosialy sy ny kolontsaina. Nifototra tamin’izay indrindra ary manodidina izay rehetra izay ny dinika teo amin’ny roa tonta ho fanamafisana ny fahaiza-manao, ny fanomezana vatsim-pianarana ho an’ireo mpianatra malagasy. Manan-tantara ny fifandraisan’i Madagasikara sy Indonésie, hoy izy, ary hohatsaraina eo amin’ny sehatra maro samihafa izany.
Nanambara kosa indray ny solontenan’ny Unicef, Elke Wisch, fa ankoatra ny fiarahabana ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy vaovao, nanararaotra ny firesahana tamin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra mahakasika indrindra ny mombamomba ny zaza eto Madagasikara ny roa tonta. Hihamafy hatrany, raha ny voalaza, ny fiaraha-miasa eo amin’ny Unicef sy ny Fanjakana malagasy mba hanatsarana ny tontolon’ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny fiarovana ny zaza eto Madagasikara. Nambarany fa tsara ny fifandraisana ary maro ireo fivoarana teo amin’ireo sehatra maro, eny fa na mbola maro aza ireo mbola hotanterahina.
Nilaza kosa, ankoatra izay, ny masoivohon’i Brésil, Rodrigo Baena, fa nahazo fanasana tamin’ny governemanta malagasy izy, sambany hanatrika ny Foara Iraisam-pirenena eo amin’ny fambolena eto amintsika. Noho izay indrindra, manararaotra ny fandalovany eto Madagasikara ity masoivoho ity amin’ny fihaonana amin’ireo manam-pahefana ambony isan-tokony eto Madagasikara. Nambarany fa nitondra soso-kevitra ara-teknika ho amin’ny fambolena ny tenany, izay hiarahana amin’ny Banky Iraisam-pirenena. Manana traikefa eo amin’ny fambolena sy ny tontolon’ny varotra i Brésil, hoy izy, ary tokony manararaotra misintona izany traikefa izany i Madagasikara.
« Sojabe » ao amin’ny Faritr’i Sofia : Manohana tsy misy fepetra an-dRajaonarimampianina
Nanamafy ny fanohanany ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ireo Sojabe ao amin’ny Faritr’i Sofia. Efa nanao fanambarana momba izany mantsy izy ireo tamin’inyvolana lasa iny, ka dia izao nohamafisiny izao indray. « Manamafy ny ...Tohiny
Ambato Boeny : Nahazo toeram-pandidiana avy tamin’ny Filoha
Fanovana entin’ny Filoham-pirenena : Omena ny sata sahaza azy ny fokontany izay akaiky ny mponina